Posted by Tranquillus | Jul 16, 2021 | Shabakada
Tababarka iimaylka Sendinblue wuxuu kuu ogolaanayaa inaad horumariso aqoontaada goobtan. Markaad shahaado siiso, waxaad yeelan doontaa aqoonta lagama maarmaanka u ah si aad u dhisto istaraatijiyad email-ka ah oo kuu oggolaan doonta inaad la samaysato xidhiidh waara oo macaamiishaada ah!
Baro sida loo sameeyo olole emayl khubaradayada ku siin doona talo wax ku ool ah iyo waliba macluumaad ku saabsan isbeddellada ugu dambeeyay ee suuqa !
Ka hel talobixin khabiir ah
sida loo maareeyo xiriiriyahaaga,
kor u qaad waxqabadka ololahaaga
oo soo saara cinwaanno cusub email.
Hel shahaadada emailka!
Baro wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato email-ka!
Markaad tababbarka dhammayso, a shahaadada khibradda Waa laguu soo diri doonaa. Waad ku dari kartaa CV-gaaga ama waxaad ku dhajin kartaa LinkedIn si aad u muujiso inaad tahay khabiir ku soo dir emailka. Waxay kaa caawin kartaa inaad horumariso fursadahaaga xirfadeed waxayna caddeyn kartaa inaad tahay ...
Tababbarka Emailka (koorsada 1) Oktoobar 15th, 2021Tranquillus
READ Daabacaada Tusaha Sinaanta Xirfadlayaasha 2022: D-7
horeHAGAHA MUHIIMKA AH EE AQOONSIGA [XEER LA'AAN]
socdaTababbarka Emailka (koorsada 2)